International Philanthropy na ndị ọka iwu ebere - Law & More
Mgbe mmadụ kpebiri ịmalite ọrụ ebere, otu n'ime ihe mbụ dị mkpa bụ ịhọrọ fọm iwu ziri ezi. Iwu Dutch mara otu ụlọ ọrụ dị iche iche nwere ike ije ozi dị ka usoro iwu maka ọrụ ebere: ntọala Dutch na mkpakọrịta Dutch. A na-ahọrọ ntọala Dutch n'oge kachasị maka ịmalite ọrụ ebere. Omume e ji mara ntọala Dutch bụ na enweghị ndị otu. N'ụzọ bụ isi, ntọala Dutch ga-enwerịrị otu akụkụ: òtù ndị isi.
Mgbe mmadụ kpebiri ịmalite ọrụ ebere, otu n'ime ihe mbụ dị mkpa bụ ịhọrọ fọm iwu ziri ezi. Iwu Dutch mara otu ụlọ ọrụ dị iche iche nwere ike ije ozi dị ka usoro iwu maka ọrụ ebere: ntọala Dutch na mkpakọrịta Dutch.
A na-ahọrọ ntọala Dutch n'oge kachasị maka ịmalite ọrụ ebere. Omume e ji mara ntọala Dutch bụ na enweghị ndị otu. N'ụzọ bụ isi, ntọala Dutch ga-enwerịrị otu akụkụ: òtù ndị isi. Ntọala Dutch chọrọ imepụta ebumnuche a kapịrị ọnụ dị ka ekwuru n’isiokwu nke nnabata. Enwere ike iru ihe mgbaru ọsọ a site na ịnweta onyinye, na-eduzi azụmahịa ma ọ bụ itinye akwụkwọ maka ego. Na agbanyeghị, amachibidoro ntọala ahụ iji kesaa uru ahụ maka ndị nrụpụta, ndị mmadụ na-etolite akụkụ akụkụ ya na ndị ọzọ. Otu ikpeazụ ('onye ọzọ'), nwere ike ịnata ịkwụ ụgwọ ma ọ bụrụhaala na-akwụ ụgwọ ndị a maka ebumnuche ma ọ bụ nke mmekọrịta, nke pụtara na ntọala bụ usoro iwu dabara adaba ịkpụzi ọrụ ebere. Ntọala nwere ndị nyere onyinye ma ọ bụ ndị ọrụ afọ ofufo. Na usoro, ndị a enweghị ikike ịtụ vootu ọ bụla. Ọzọkwa, ntọala nwere ike ịnwe ihe onwunwe a na-anaghị ahụ anya, nwere ụgwọ, banye na nkwa ma mepee ụlọ akụ. Ntọala nwekwara ike iduzi azụmaahịa.
N'adịghị ka ntọala, otu nwere ndị otu, ndị jikọtara ọnụ na Nzukọ Ezumezu. Nzukọ a zuru oke nwere ikike dị ukwuu, ebe ọ bụ n’etiti ndị ọzọ nwere ọrụ maka nhọpụta na iwepu ndị isi. Ọzọkwa, a ga-emezigharị edemede nke mgbakwunye. Njikọ ahụ agaghị ekesa uru n'etiti ndị otu ya. Dịka ntọala, mkpakọrịta nwere ike ịrụ ọrụ iwu dịka ịzụ ụlọ. Amachibidoro nke abụọ, agbanyeghị, enwere ike ịmachibido ma ọ bụrụ na enwere ike ịhụ otu ahụ dịka mkpakọrịta adịghị mma.
N'agbata ntọala na mkpakọrịta ahụ enwere ike ịdị iche na ibu ndị isi nwere ike ịdị.
Ihe nwere ike Law & More ime iji nyere gị aka?
Law & More ahụmịhe na iduzi ma na-enyere aka ịtọ ntọala Dutch na nke ọrụ ebere mba ụwa ma ọ bụ ndị ahịa onwe ha nwere nnukwu ebumnuche na ebumnuche.
Anyị na-adụ ọdụ na ịmepụta, idobe na ịdebanye aha na ọrụ ebere Dutch na ntọala na-abụghị uru. Enyemaka anyị metụtara akụkụ niile nke ụtụ Dutch, iwu, ọchịchị na nsogbu mkpebi esemokwu.